Muxaadaro – Page 6 – Abuubakar.org
Kulankii Majliska Culimada North America
Hambalyada Ciida Masjid Abuubakar, goorta iyo goobta lagu tukanayo
Ciid Mubaarak تقبل الله منا ومنكم صلاح الأ عمال Xarunta Abubakar waxay Hambalyada Ciida u diraysaa Dhamaan Muslimiinta, gaar ahaan kuwa Gobolka Minnesota iyo Jamaacada Xarunta, waxaan idin leenahay Ciid wanaagsan, illaahay hanaga aqbalo anaga iyo idinkaba acmaasha khayrka ah oo dhan. Sanadkan sanadkiisa illaahay hanagu gaarsiiyo imaan iyo alle ka cabsi. Illaahay Dhamaan muslmiinta…
Muxaadaro: 21 cashar oo laga qaadanayo Suuratu An-nuur
Ogaysiis Muhiim ah Ciidu waa Axada soo socota November 6, 2011 Masaajidka Abuubakar Wuxuu dhamaan Muslimiinta dagan Minnesota iyo aga gaarkeeda Ogaysiinayaa in Ciida bisha Dul-Hijja ay ku beegantahay Axad November 6, 2011 oo ah maalin axad ah. Waxaa lagu tukan doonaa Minneapolis Convention Center sidii caadada inoo ahayd. Ogaysiiska Ciida oo faah faahsan dib ayaan idiinla…
Ogaysiis Muhiim ah Ciidu waa Axada soo socota: Masaajidka Abuubakar Wuxuu dhamaan Muslimiinta dagan Minnesota iyo aga gaarkeeda Ogaysiinayaa in Ciida bisha Dul-Hijja ay ku beegantahay Axad November 6, 2011 oo ah maalin axad ah. Waxaa lagu tukan doonaa Minneapolis Convention Center sidii caadada inoo ahayd. Ogaysiiska Ciida oo faah faahsan dib ayaan idiinla soo socod siindoonaa …
Ogaysiis: 21 Darsi oo laga qaadanayo Suuratu An-Nuur-Sh. Maxamed Idris
Khayrka kasoo qayb gal oo Imaankaaga siyaadi. Muxaaddaraad dhicidoona Asbuuca soo socda Waxaa la ogaysiinayaa Dhamaan Muslimiinta reer Minnesota iyo nawaaxigooda in asbuuca soo socda Masjid Abubakar As-Saddique Islamic Center iyo Minnesota uu marti uyahay Sh. Maxamed Idris Axmed. Sh. Maxamed ayaa bixin doona muddada kooban ee uu nasoo booqday khudbo jimce iyo Muxaadaraad kala…
Muxaadarooyinkii hore ee kaydka Abuubakar
Halkan ka dhegeyso muxaadarooyinkii hore ee Masjid Abuubakar Assidiiq ee Minneapolis…
Taariikhda Somalia – Dr Sadiq Enow
Muxaadaro ku saabsan taariikhda Soomaaliya oo uu masjid Abubakar ka jeediyey Dr Eenow
Dhibaatada adduunyadda – Sh Abdirihiim Abu- Caynayn
Waa muxaadaro ka mid ah kaydka muxaadarooyinka Abuubakar
Kaydka Muxaadarooyinkii hore Halkan ka akhri
Booqo bogga kaydka muxaadarooyinka